URobert UBruce, uKumkani waseScotland kunye nebali lakhe elihle lokufunda. | Uncwadi lwangoku
Iifoto zomdlali weqonga waseScotland uAngus Macfadyen kwiifilimu Intliziyo elikroti (1995) kunye URobert The Bruce (2019)
Phakathi NgoJuni 23 no-24, 1314 Kwenzeka idabi le Ukutshiswa kwebannock, apho imikhosi yaseScotland ikhokelwa nguKumkani URobert I Bruce -I-Bruce yezeMbali- yoyisa amaNgesi ngokuyalela U-Edward II. Yayingu Uloyiso olugqibeleleyo oko kwakhokelela Inkululeko yaseScotland Kwiminyaka emithathu kamva.
Kwaye uRobert The Bruce yenye ye ookumkani endibathandayo maxesha onke. Zezi Iincwadi ezi-3 zokumazi kwaye uyazi ngembali yayo inomdla njengoko inxulumene ngokusondeleyo nathi, kuba Intliziyo kunye nomhlobo wakhe osenyongweni Beze apha ukuba balwe namaMoor.
1 URobert The Bruce kunye nam
2 Isivumelwano sikaRobert UBruce-uJohn Barbour
3 Intliziyo emnyama-uLeon Arsenal
4 ILitye eliya kwiSiphelo - uJesús Maeso de la Torre
URobert The Bruce kunye nam
Olona lwazi lincinci kwimbali kunye nelaziest ekufundeni ngokuqinisekileyo Unokuchonga kwaye ukhumbule uRobert Bruce en Intliziyo elikroti (amashumi alithoba anesithoba anesihlanu). Ngokwenyani, umlinganiswa ophambili, UWilliam wallaceWafa ngo-1305 kwaye akazange ahambisane noRobert, owamkela itrone ngo-1306. UWallace wadibana nabazali bakaRobert. UJames Douglas, uNegro, umhlobo wakhe osenyongweni nendoda yesandla sasekunene, engazange ivele kumdlalo bhanyabhanya kuba inayo kuye kuphela ukuba kukho umntu onesibindi sokwenza oko.
Uyise kaRobert kumdlalo bhanyabhanya unjalo uphawu oluthandekayo olunobuso obukhubazekileyo. Nguye ocebisa unyana wakhe, oboniswe ngeenjongo ezingathandekiyo kuWallace emva koko waboniswa enomoya wokukhulula, ngakumbi kwindawo yokugqibela yentlawulo kwidabi laseBannockburn. Kodwa oyena wayesebenze ngenkululeko yayinguRobert.
Ityala elininzi lomdla wam kumfanekiso wakhe Wayenokutolikwa okwamenza waziwa kancinci kodwa umdlali owoyikekayo waseScotland wabizwa UAngus MacFadyen, ezingagcinanga kuphela le ngqungquthela uGibson umfana, kodwa weba ngaphezulu kwesinye. Ukusuka apho ndayichitha imbali yabo.
Ezinye zezona ziqendu zibalulekileyo Ndikhuthazekile kwakudala ibali, njengaye Intliziyo yaqholwa iziswe ngu UJames douglas baya eSpeyin, apho bawa khona besilwa kunye nokumkani UAlfonso XI waseCastile kwidabi lase Theba. Leyo yayiyimvelaphi yokwenyani yesiteketiso "iBraveheart." Kwaye kule nyanga kukhutshwa imovie entsha enesihloko ngolu hlobo, URobert The Bruce, apho iMacFadyen ithatha indawo ebimlingise kwiminyaka engama-25 eyadlulayo.
Kodwa ukwazi ngakumbi nangokweenkcukacha Nazi izinto ezintathu ezifundwayo:
Isivumelwano sikaRobert uBruce -UJohn Barbour
I-classic yale nto IArchdeacon yaseAberdeen, ntoni ngaphakathi 1376 wabalisa ngezinto ezazisenziwa nguRobert. Olu hlobo lwaluyi- Inguqulelo nguFernando Toda Iglesia, osuka kwiDyunivesithi yaseSalamanca. Ubalisa zonke lawula kaBruce de kwasekufeni kwakhe, ngo-1329, kunye nomhlobo wakhe neqabane lakhe, uJames Douglas.
Intliziyo emnyama -Leon Arsenal
Ngombhalo ongezantsi we Inkqubela yaseScotland kumda waseGranada, ubalisa eso siqendu sokuwa kuka-douglas ngo-Agasti 1330. IArsenal ngumbhali we Iireveli ezingaphezulu kweshumi elinambini kunye nezincoko ezifundisayo. Kwiinoveli, ubhale imisebenzi ye uhlobo lwembali kunye nefantasy, kwaye ufumene amabhaso afana neSixeko saseZaragoza seeNoveli zeMbali okanye iMinotaur.
Ilitye lesiphelo -UJesús Maeso de la Torre
Maeso de la Torre ngu inkulu kwimbali yenoveli yelizwe. Wafunda ukufundisa kwi Ubeda, idolophu yakowabo, kwaye kamva waphumelela kwiFilosofi nakwiMbali eCádiz, apho ahlala khona. Ukwangumbhali wengqokelela yemibongo Ukunyathela kwamaphupha (1976), kodwa udumo lwayo ikakhulu ngenxa yenoveli yezembali enezihloko ezinje nge Al-Gazal, umhambi ovela kumacala amabini (2000) Ibhokisi yamaTshayina (2015) okanye eyona yamva nje, Iinyembezi zikaJulius Caesar.
Isihloko sibhekisa kwiintsomi Ilitye leScone, apho ookumkani baseScotland bathweswa isithsaba. URobert Bruce wathembisa ukuthatha inxaxheba Umnqamlezo ukuphumelela inkxaso Upapa ka-Avignon kwinkululeko yelizwe lakho. Inkqubo ye- ukufa Yayiwele ngaphambili, kodwa wayenethuba lokunikezela uJames Douglas ngenjongo yokuthatha intliziyo yakhe eqholiweyo kwiLizwe eliNgcwele ukuzalisekisa isithembiso sakhe. Bafike kuphela e-al-Andalus.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » URobert The Bruce, ukumkani waseScotland kunye nebali lakhe elihle lokufunda.